Hordhac: Tottenham vs Liverpool – Wax walba oo ku saabsan kama dambeysta koobka UEFA Champions League. – Gool FM
Hordhac: Tottenham vs Liverpool – Wax walba oo ku saabsan kama dambeysta koobka UEFA Champions League.
Abdirashid Mohamud June 1, 2019
(Madrid) 01 June 2019. Kooxaha Tottenham Hotspur iyo Liverpool ayaa isugu yimid final-ka tartanka Champions League iyadoo Mauricio Pochettino iyo Jurgen Klopp ay sugayaan iney markoodii ugu horreysay buugga taariikhda tartankaan magacooda lagu qoro.
Labada kooxood waxey soo galeen dadaal aan caadi aheyn, Reds ayaana si lama filaan ah uga soo baxday Barcelona intii lagu jiray semi fina-ka, halka Spurs qudheeda ay si aan saadaasha ku jirin uga soo gudubtay Ajax Amsterdam oo ay wadankooda kusoo garaaceen.
Labada tababare wax koob ah kulama guuleysan labada kooxood, waxeyna heystaan fursad ay tartan weyn ku hanan karaan, caawana waxaa la sugi doonaa midka magaciisa lagu qoro hadal hayo Madrid.
Jurgen ayaa final-kii saddexaad oo yurub ah gaarsiinaya Liveprool, laba qasaaro ayuu horay usoo qaatay, caawa ayuuna rajeynayaa inuusan la kulmin wixii uu kala kulmay Sevilla 2016 iyo sidoo kale Real Madrid 2018.
Kulanka: Tottenham vs Liverpool
Garoonka: Estadio Wanda Metropolitano
Saacadda: 10:00 Habeenimo (XGA)
Harry Kane, Harry Winks iyo Davinson Sanchez ayaa kasoo kabtay dhaawacyadii ay qabeen, waxaana macquul ah iney kulanka lug ku yeeshaan, halka Wanyama shaki la galinayo sidoo kalana Ben Davies ma ciyaari doono.
Dhinaca kale Roberto Firmino ayaa dib ugu soo laabtay kooxda kaas oo kasoo kabtay dhaawac uu qabay, kaliya Naby Keita ayaa kooxda Reds ka maqnaan doona kulanka caawa kaas oo dhaawac dartiis looga saaray liiska 23-ka xiddig ee lasoo xulay.
Liverpool ayaa noqon doonta kooxda saddexaad ee ugu guulaha badan tartanka Champions League wakhtiga oo dhan hadii ay guul ka gaarto Spurs, maadaama ay markii 6-aad hanan doonto.
Tottenham iyo Liverpool waxey guud ahaan kulmeen 170 jeer dhamaan tartamada oo dhan, Reds ayaa guuleysatay 79 jeer halka Spurs ay guul heshay 48-jeer, waxeyna barbaro galeen 43-jeer.
Spurts waa kooxdii 40-aad ee gaartay final tartan yurub ah, waana kooxdii ugu horreysay oo ay tahay markii ugu horreysay tan iyo 208 markaas oo Chelsea ay u aheyd wakhtigii ugu horreeyay, waxey noqon karaan kooxdii 23-aad ee ku guuleysta tartanka yurub.
Maadaama uu final-kii Kiev gool ka dhaliyay Madrid sanadkii hore, Mane wuxuu noqon karaa xiddigii 8-aad ee final-ka tartankaan ka dhaliya wax ka badan hal gool.
Waxaa lasoo daawaday lix jeer oo hore iney final-ka tartankaan isugu yimaadaan kooxo isku wadan ah.
Klopp oo ka hadlay dhowr arimood uu qeyb ka yahay Firmino kahor kulanka finalka Champions League
Wadankee ayey ciyaartoyda ugu badan kaga soo muuqdeen final-ka Champions League? Xog aruurin la sameeyay ka hor kulanka caawa.